Cunto siinta shaqaalaha ka baxsan muddada Covid-19
Xaaladaha cuntada ee shaqaalaha way ka duwan yihiin hadba shirkaddu inay shaqaale ka tahay 50 iyo in kale.
Shirkadda ugu yaraan 50 shaqaale ah
Shirkadaha ay ku yaalliin ugu yaraan 50 shaqaale, waa inaad, ka dib la-tashiga CSE, siisaa shaqaalaha goobo cunto:
kaas oo la siinayo kuraas iyo miisas ku filan; taas oo ay ku jiraan qasabada biyaha la cabbo, oo cusub oo kulul, oo loogu talagalay 10 isticmaale; iyo kaas oo la siinayo hab lagu ilaaliyo ama lagu qaboojiyo cuntada iyo cabitaanka iyo rakibida dib u kululaynta suxuunta.
Waa mamnuuc in loo ogolaado shaqaalaha inay ku cunaan cuntadooda dhismaha loo qoondeeyay inay shaqeeyaan.
Waxaad ku gudan kartaa waajibaadkaaga siyaabo kala duwan: jikada ay shaqaaluhu ku cuni karaan cuntooyinkooda, laakiin sidoo kale makhaayad ama xarun dib-u-dhiska shirkadda dhexdeeda, ama makhaayad shirkadeed
Shirkad kayar 50 shaqaale
Haddii aad leedahay wax ka yar 50 shaqaale waajibaadka ayaa ka fudud. Waa inaad kaliya siisaa shaqaalaha meel ay ku cuni karaan xaalad caafimaad iyo badbaado oo wanaagsan (nadiifinta joogtada ah, qasacadaha qashinka, iwm). Qolkan waxaa lagu dhejin karaa…
Cunto bixinta inta lagu guda jiro Covid-19: shaqaaluhu way ku cuni karaan goobaha shaqada July 10th, 2021Tranquillus
horeKa noqoshada heshiiska wadajirka ah: kakanaanta arjiga dib-u-noqoshada ayaa qiil u yeelan kara joojinta la beddelay iyadoo waqti la qaadanayo
socdaTababar kale: wareysiga shaqaaleeyaha ee isweydaarsiga